Miahiahy amin'ny famonjena anao - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Miahiahy amin'ny famonjena anao
Fa maninona ny olona, ​​sy ny Kristiana miaiky tena, no tsy afaka mino ny fahasoavana tsy misy fepetra? Ny fomba fijery manjaka ankehitriny eo amin'ny Kristiana dia mbola ny famonjena dia miankina amin'ny zavatra efa nataony na tsy nataony. Avo loatra Andriamanitra ka tsy misy olona mahay mitaingina azy; hatreto dia tsy azo raisina. Lalina tokoa ka tsy afaka miditra ambaniny. Tadidinao ve ilay hiran'ny filazantsara nentim-paharazana?
Tsa- ka hihira an'ity hira ity ny ankizy kely satria afaka mihetsika amin'ny teny mety izy ireo. "Avo dia avo" ... ary mihazona ny tanany eo ambonin'ny lohany; "Hatreto" ... ary aparitaka ny sandriny: "lalim-bolo" ... ka miankohoka araka izay azony atao. Mahafinaritra ny mihira an'ity hira mahafinaritra ity ary afaka mampianatra fahamarinana lehibe momba ny toetran'Andriamanitra izany. Fa rehefa mihalehibe isika, firy no mbola mino an'izany? Taona vitsy lasa izay, Gazetin'ny Vondron’olompirenena Malaza - dia nanao tatitra fa ny 56 isan-jaton'ny Amerikana, izay ny ankamaroany dia nitantara ny tenany ho kristiana, fa rehefa mieritreritra ny fahafatesany izy ireo dia tena miahiahy na manahy momba izany, "tsy misy Famelan-keloka ».
Ny tatitra, miorina amin'ny fanadihadiana nataon'ny Gallup Institute, dia manampy hoe: "Ny valim-panadihadiana toy izany dia mampametra-panontaniana ny amin'ny Kristiana any Etazonia na mahazo ny hevitry ny" fahasoavana "ary manoro hevitra ny hanamafisana ireo fampianaran'ny Baiboly amin'ny Kristiana. Mampianatra fiangonana. Nahoana ny olona sy ny tena mitonona ho tena no mihevitra ny tsy hino ny fahasoavana tsy misy fepetra? Ny fototry ny fanavaozana protestanta dia ny fampianarana ara-Baiboly fa ny famonjena - ny famelan-keloka tanteraka amin'ny ota sy ny fampihavanana amin'Andriamanitra - dia tamin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany.
Na izany aza, ny fomba fijery manjaka eo amin'ny Kristianina dia mbola ny amin'ny farany ny famonjena dia miankina amin'ny zavatra vita na tsy vita. Ny iray dia maka sary an-tsaina ny fifandanjana lehibe avy amin'Andriamanitra: ao anaty vilia iray ny asa tsara ary ao amin'ny iray hafa ny asa ratsy. Ny vilia baolina manana lanja lehibe indrindra no manapa-kevitra ho an'ny famonjena. Tsy mahagaga raha matahotra isika! Ho hita amin’ny fitsarana ve fa nivangongo “avo” ny fahotantsika ka na ny Ray aza tsy afaka mijery azy ireo, “maro” ka tsy afaka manarona azy ireo ny ran’i Jesosy, ary nilentika “lalina aoka izany” isika ka afaka ny Fanahy Masina. tsy tonga any aminay intsony? Ny marina dia tsy mila manahy isika raha hamela antsika Andriamanitra; Efa nanao izany izy: “Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika”, hoy ny Baiboly ao amin’ny Romana. 5,8.
Nohamarinina ihany isika satria Jesosy maty sy nitsangana ho antsika. Tsy miankina amin’ny hatsaran’ny fankatoavantsika izany. Tsy miankina amin’ny hatsaran’ny finoantsika akory izany. Ny finoan’i Jesosy no zava-dehibe. Ny hany tsy maintsy ataontsika dia ny matoky azy sy manaiky ny fanomezany tsara. Hoy i Jesosy: “Izay rehetra omen’ny Raiko Ahy dia manatona Ahy; ary na iza na iza manatona Ahy dia tsy horoahiko hiala. Fa tsy tonga avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka Ahy. Fa izao no sitrapon'izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very na inona na inona amin'izay nomeny Ahy, fa ny hatsangako amin'ny andro farany izany. Fa izao no sitrapon'ny Raiko, dia ny hahazoan'izay rehetra mahita ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany » (Jao. 6,37-40,). Izany no sitrapon’Andriamanitra ho anao. Tsy mila matahotra ianao. Tsy mila manahy ianao. Afaka manaiky ny fanomezan’Andriamanitra ianao.
Amin'ny alàlan'ny famaritana, ny fahasoavana dia tsy mendrika. Io dia tsy fandoavana. Fanomezana maimaimpoana maimaim-poana io. Izay rehetra te handray izany dia mandray azy. Tsy maintsy mahita an'Andriamanitra amin'ny fomba vaovao isika, araka ny asehon'ny Baiboly azy. Andriamanitra no Mpanavotra antsika fa tsy ilay mpanimba antsika. Izy no Mpamonjintsika fa tsy Mpanapaka antsika. Izy dia namanay, fa tsy fahavalontsika. Momba antsika Andriamanitra.
Izany no hafatry ny Baiboly. Hafatra avy amin’ny fahasoavan’Andriamanitra izany. Ny mpitsara dia efa nanao izay rehetra ilaina mba hahazoana antoka ny famonjena antsika. Izany no vaovao tsara nentin’i Jesosy ho antsika. Ny dikan-teny sasany amin'ny hiran'ny filazantsara taloha dia mifarana amin'ny tononkira hoe: "Tsy maintsy miditra amin'ny varavarana ianao". Ny varavarana dia tsy fidirana miafina izay tsy hitan'ny vitsy. Ao amin'ny Matio 7,7-8 Mampirisika antsika i Jesosy hoe: “Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava dia hahita ianareo; dondony dia hovohana ianareo. Fa izay mangataka no mahazo; ary izay mitady any dia hahita; ary izay mandondòna ao no hovohana.